Dokambarotry ny Fety Aostraliana Mampiroborobo Ny Fahasamihafana Niteraka Adihevitra Ankatoky ny Fetim-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2017 8:26 GMT
Saina Teratany – Diabe sy Famoriam-bahoaka Andron'ny Fananiham-bohitra, Brisbane 2007. Avy amin'ilay mpisera Flickr David Jackmanson (CC BY 2.0)
Niteraka resabe antserasera ny dokambarotra roa ho an'ny fetim-pirenen'i Aostralia mankalaza ny fahamaroan-kolontsaina.
Ny voalohany avy amin'i Meat and Livestock Australia (MLA) izay mampiroborobo ny zanak'ondry ho toy ny hena hatono safidiana. Nahasanganehana matetika ny dokambarotry ny MLA taloha. Tsy nanivaka ny farany. Manomboka amin'ny vondrona vazimba teratany Aostraliana manangana fitonoan-kena eny amin'ny tora-pasika. – “Ho avy ny hafa rehetra?” Hoy ny olona iray. “Toerana mahafinaritra tahaka ity, ho voafono io alohan'ny ahafantaranao azy”, hoy ny iray hafa mamaly, ary azo antoka, ho avy hanatevin-daharana azy ireo atsy ho atsy ny Holandey, ny Britanika, ny Frantsay, ny Shinoa sy ny sisa maro hafa, ho tonga amin'ny sambo ny tsirairay.
Raha nahita sambo maoderin'ny “boat people” [“vahoakan'ny sambo” mpitsoa-ponenana nameno botry ho ao Aostralia am-polony taona lasa izay], nanontany am-pihantsiana ny vehivavy iray hoe: “Fa angaha tsy “vahoakan'ny sambo” avokoa isika rehetra?” — tombotomboka miharihary amin'ny politikan'ny mpitady fialokalofana mampifaditra ao Aostralia. Alefa any amin'ireo foibe ivelan-tanibe ao amin'ny nosy Manus sy Nauru, izay voalaza fa mahazatra ao ny fanitsakitsahana sy ny fampijaliana ireo mpitady fialokalofana avy ao Aostralia tonga amin'ny sambo tsy manana visa manan-kery.
Ity ny voatra amin'ny endrika lava :
Natao hanehoana ny tantaran'ny fifindra-monina ao Aostralia ny dokambarotra ary mankalaza, ankoatra ny hafa, ny fahasamihafana sy ny fahamaroan-kolontsaina ao amin'ny firenena. Mandray anjara amin'izany ireo Aostraliana ambony sasany tahaka an'i Cathy Freeman, teratany nahazo medaily volamena tamin'ny Lalao Olaimpika sy i Adam Gilchrist, mpanao cricket taloha.
Manome ny tsiron'ny fihetsiky ny kaonservativa manoloana ny olana manodidina ny Fetin'i Aostralia ireo fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Rupert Murdoch ao amin'ny Daily Telegraph. Nifantoka tamin'ny fanadinoana ny daty tamin'ny dokambarotry ny MLA kosa ilay bilaogera Tim Blair. Ny valinteny mahazatra dia “Manao ankivy ny hena amin'ity fetin'i Aostralia ity aho”. Nitsikera ny dokambarotra ny fanehoan-kevitra maherin'ny 160.
Nitondra valinteny mitovy ny lahatsoratr'i Kevin Donnelly «Fetin'i Aostralia ny 26 Janoary. Atsaharo ny miezaka manova izany. Nalaza ny fanehoan-kevitr'i Karyn:
Voalazanao tsara ry Kevin Donnelly. Leo ny fampianarana avy amin'ireo mpaneho hevitra ankavia momba ny fanaratsiana an'i Aostralia aho, ary raha hitarina, ny fanaratsiana ny Aostraliana fotsy hoditra. Mahafinaritra ity ity firenena izay tabatabain'ny vitsy an'isa mitady lalana hatrany hamoaka ny heviny amin'ny lohahevitra rehetra na ity na manao izay hitrangàny mba hinoana azy amin'ny fotoanany.
Niteraka lahatsary esoeso sasany ny dokambarotry ny MLA. Azo antoka fa “namely tamin'izany” i Yakovich:
Ireo zavatra tsy mety amin'ny Fetin'i Aostralia 2017
Manasongadina sakafo mampiavaka an'i Aostraliana i Watto, mofomamy hena:
@gettoolsdirect mampahafantatra ny firenena.
Mampiadihevitra noho ny antony hafa ny Andron'i Aostralia. Maro ireo mandray azy ho #InvasionDay [Androm-Pananiham-bohitra] satria ny 26 Janoary no tsingerintaonan'ny fahatongavan'ny andian-tsambo Britanika ‘voalohany’ tamin'ny taona 1788.
Aostraliana indizeny mpanao hatsikana sady mpilalao sarimihetsika Nakkiah Lui naneho hevitra tao amin'ny Facebook:
Marobe ireo zavatra itiavana ny dokambarotry ny zanak'ondry – arahabaina ireo mpamorona sy izay rehetra nandray anjara tamin'ny fanomezana endrika isan-karazany sy mampiditra ny rehetra amin'ny maha Aostralia an'i Aostralia sy ny mety ho mahaizy azy.
Na izany aza anefa, dokambarotra izany ary manontany tena aho, ahoana no hamalian'ny olona ny dokambarotra raha nanomboka tamin'ny fanehoana ny marimarina kokoa amin'ny fahatongavan'ireo Sambon'i Tall. Fahatongavana izay nanomboka tamin'ny fandripahana faobe ny vazimba teratany, fahatongavana izay niafara tamin'ny faneren'ny governemanta hanao ny fandripahana, fampisaraham-bazana sy fampijaliana nandritra ny taona maro; mbola hiafara amin'ny fankalazana sy ny fitonoan-kena ihany ve ny fiafaran'ity dokambarotra ity? Mbola hahatonga anao hividy zanak'ondry ihany ve ity dokambarotra ity?
Misy ny fanentanana #changethedate (hanova ny daty). Afaka mividy labiera mihitsy aza ianao ao amin'ny Orinasa Fanaovana Zava-pisotro Sparkke Change izay manohana ny famindra-toerana ny fetim-pirenena :
@MomentsAU hoy i Enuf. Aleo liona toy izay zanak'ondry ao anatin'ny fampidirana ny rehetra.
Fandrahonana nampanaisotra dokambarotra ahitana tovovavy roa manao hijab
Tamin'ny stoush hafa indray (voambolana Aostraliana midika hoe “tohan-kevitra”), nalàna taorian'ny fandrahonana niseho tao amin'ny media sosialy ny takela-dokambarotra iray nampanaovin'ny governemantam-panjakana Victoria mampiroborobo ny Andron'i Aostralia . Nampiseho tovovavy roa manao hijab ilay dokambarotra. Nahangona 160 000 AUD (120 000 Dolara Amerikana) ny fanentanana iray hametraka indray ilay dokambarotra.
Nahazo vahana ny fanentanana hametraka indray ny takelaka #AustraliaDay miaraka ahitana tovovavy roa manao hijab
Notoherin’ ireo mpanakiana ilay takela-dokambarotra ny hoe ny Miozolomana Aostraliana no lasa endrik'ilay fetim-pirenena. Mety ho lasibatry ny fanavakavahana na fitsarana an-tendrony ao Aostralia ny Miozolomana izay mandrafitra ny 2% eo ho eo ny mponina. Ohatra, nisioka ho setrin’ ny takela-dokambarotra i Kim Vuga, mpanentana ny «Sakano ny Sambo» sy mpanorina ny antoko politika antsoina hoe Love Australia or Leave (Tiavo i Aostralia na Mialà) :
TAHAKA NY HOE HAINGANA NY TAKELAKA ANDRON’ I AOSTRALIA MIOZOLOMANA REHEFA VATSIAN'NY ELATRA ANKAVIA MPAMPATORY!
“Adihevi-pirenena feno fanajana…no fomba tokana handrosoana”
Tsy vitan'ny lahatsoratra iray ihany ny fidirana lalina amin'ny olana mifandraika amin'ny Andron'i Aostralia. Nanoratra momba ny dokambarotry ny Meat and Livestock Australia i Chris Graham, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky New Matilda, ary nandray ny maro tamin'ny fomba fijerin'ny tia fivoarana. Anisan'ny ao anatin'ny vondrona Sparkke izy. Ahitana tahaka izao ny fomba fijeriny:
Amin'ny fotoana ankafiziko, mihevitra aho fa marobe ny zavatra azo tiavina momba ilay dokambarotra. Saingy rehefa eritreretina ho singam-barotra sy hatsikana fotsiny amin'izao, fa minia tsy miraharaha izay lohahevitra entiny.
[…] Ny adihevi-pirenena feno fanajana momba ny Andron'i Aostralia no fomba tokana handrosoana.
Ny toroheviny ho an'ny Aostraliana:
Raha tsy siora ianao hoe ahoana no ahatsapana ilay dokambarotra, maninona raha manontany olona teratany mikasika ny fahatsapany izany. Ary raha tsy mahalala olona teratany ianao, …eny…tokony nilaza zavatra taminao sahady izany toe-javatra izany
Na izany aza, misy ihany ny fisalasalana kely fa hisy ny adihevitra momba ireo dokambarotra manodidina ny fitonoankena (barbecue) amin'ny Fetin'i Aostralia marobe.